Dhageyso :-Laftigareen Oo La Kulmay Wakiilka Qaramada Midoobay Ee Soomaaliya:- (Sawiro) - Awdinle Online
Home News Dhageyso :-Laftigareen Oo La Kulmay Wakiilka Qaramada Midoobay Ee Soomaaliya:- (Sawiro)
Dhageyso :-Laftigareen Oo La Kulmay Wakiilka Qaramada Midoobay Ee Soomaaliya:- (Sawiro)
December 10, 2019 (Awdinle Online) –Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxaa maanta Xafiiskiisa uu Ku qaabiley Wafdi Ka Socdey Qaramada Midoobay .
Wafdiga waxaa hugaaminayay Wakiilka Qaramada Midoobay Soomaaliya Amb. James Swan waxaana Garoonka diyaaradaha Baydhabo kusoo dhaweeyay Mas’uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed iyo xubno kale.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa masuuliyiinta Uga warbixiyey Xaaladda guud ee Koonfur galbeed, Waxaana uu Ka codsadey madaxda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya In ay sii laba jibaaraan dadaalada ay ka wadaan Koonfur galbeed.
Wakiilka Qaramada Midoobay Soomaaliya ayaa balan qaadeen in Koonfur galbeed Soomaaliya Ay Tix-gelin gaar ah siin doonaan.
Kulanka ayaa qaatay muddo badan waxaa ugu dambeyn lagu soo hadal qaaday Arrimo la xiriira doorashooyinka sanadka 2021 iyo xoojinta amniga
Kulanka markuu soo idlaaday waxaa Warbaahinta ka hadley Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya
Previous articleQarax Ciidamo ka tirsan AMISOM lagula eegtay Magaaladda Muqdisho
Next articleMaxaa Ka Jira In Galmudug Ay Ka Dhismi La’Dahay Dowladda Fedraalka :XOG